LGBTQ+ Hushamwari Mabasa - Utah Pride Center
Dzimwe nguva tinowana zvikumbiro zvekutumira mikana yemabasa pawebhusaiti yedu. Isu tinongotumira zvinyorwa zvemabasa kune avo vashandirwi vanobvumidza vemunharaunda medu kuti vanzwe vakachengeteka uye vachitsigirwa pabasa.
ONA: Jobho zvinyorwa zvichapera mazuva makumi matatu kubva pazuva repositi. Ingotizivisa pa webmaster@utahpridecenter.org kana iwe uchida kuwedzera kune mamwe mazuva makumi matatu.
Kuti uwane rako basa mukana wakanyorwa, ndapota nyorera Joni @ webmaster@utahpridecenter.org
Tungamira Ops Tsigiro Nyanzvi - Federal Reserve Bank yeSan Francisco
Kambani: Federal Reserve Bank yeSan Francisco
URL yekushandisa: https://rb.wd5.myworkdayjobs.com/FRS/job/Salt-Lake-City-UT/Lead-Ops-Support-Specialist_R-0000002200
Lead Ops Tsigiro Nyanzvi (R-0000002200)
Iyo Salt Lake City (SLC) Hofisi yeDunhu uye Bhizinesi Engagement (ORBE) timu ine mukana wakanakisa weakasarudzika Lead Operations Support Specialist kuti abatane neboka redu. Chikwata chedu chiri kutyaira rwendo rweSan Francisco Federal Reserve Bank's (SF Fed) kuti ive sangano rinobatikana nenharaunda kuburikidza nehurongwa hwakazara hwekuita hunowedzera basa remapazi emunharaunda kugadzira hukama hunogara kwenguva refu nevebhizinesi, nharaunda, uye vatungamiriri vehurumende. Kana iwe uchifarira kushandisa nguva yako uye matarenda kune inonakidza, inotungamirwa nemamishinari sangano riri kuita basa rakakosha munharaunda yemuno, iyo SF Fed inogona kunge iri nzvimbo yako!
Iri basa richave rakakosha mupiro pane yedu ORBE timu uye richava nebasa rekutonga data neruzivo muSalesforce; kubata uye kutungamira mapurojekiti ane chekuita nekuita kwevashandi; kubatsira nekutsigira kuitwa kwemaforamu ematunhu; uye tsigira zvirongwa zveruzhinji. Basa iri richavawo nebasa rekubatsira nemabasa akasiyana anodiwa kutsigira SLC Branch Board of Directors nevatungamiriri vakuru. Hunyanzvi, kutarisisa kune zvakadzama, kutaurirana kunoshanda, uye kugona kuzvimiririra kupindura uye kutyaira kune mhedzisiro kwakakosha mune iri basa.
Wedu akakodzera mumiriri achave nekugona kwakasimba kwekutaurirana zvinobudirira, kusanganisira email uye mu-munhu kutevera ups; kugona kudyidzana uye kubatana nevatungamiri-vanoshanda kuti vave nechokwadi chekupedzwa kweprojekiti; uye hunyanzvi hwekuchinjika uye kutungamira hurongwa hwekubatikana tichifunga nezvekuchinjana kwekushanda kwenhengo dzechikwata chedu kuwedzera kuchengetwa kwevashandi uye tsika.
Mune iri basa, iwe ucha:
Tungamira kubatanidzwa kwevashandi uye mapurojekiti echikwata.
Ita yekupinda data, kunyengedza, uye kushuma uchishandisa imwe kana akawanda matekinoroji. Simbisa zvinyorwa zvekururama uye kukwana.
Kuzvimiririra kugadzira uye kugadzira mishumo.
Tora chikamu mumapurojekiti akakosha-anoshanda anoda kurongeka kweprojekiti mukupindura kune zvinodiwa nebhizinesi.
Kudyidzana nevakakosha vanobatana kubata hukama hwevatengesi. Shanda padhuze nemapoka evashandisi uye vane makondirakiti vanopa masevhisi kuti vaongorore zvinodiwa zvemukati uye mashandiro emutengesi.
Ita ongororo yemutengo uye shandisa kuti uone mhinduro dzinodhura dzezvibvumirano zviripo uye zveramangwana.
Shandisa ruzivo rweboka kutsigira mabasa ezuva nezuva eboka.
Batira pamwe nekubatana nemitsara yebhizinesi reboka nenzvimbo dzekutsigira dzeBhangi.
Ronga kugadzwa uye zviitiko zvehofisi, uchipindura kumibvunzo nenguva uye inoshanda.
Batsira nemamwe mabasa ekushanda sezvinodiwa.
Associate degree kana kupfuura.
Zvinoda makore mana kana anopfuura ehukama hwehunyanzvi hwekuita ruzivo.
Nyanzvi muMicrosoft Office Suite inosanganisira Matimu uye Outlook.
Chiitiko chepakati neSalesforce CRM.
Chiitiko ne database-inofambiswa software inosarudzwa.
Sangana nekuunganidza, kushandura, kuongorora, uye kuzivisa pane data rinodiwa.
Ziva kushanda-muchinjika kusangana nemukati nekunze zvinodiwa nevatengi zvinofarirwa.
Ziva kushanda wakazvimirira kuti upedze mabasa aunoda.
Chiitiko chekuronga chaiwo zviitiko uye chiitiko chibatiso chinhu chikuru chekuwedzera!
Kutanga Gumiguru 1, 2021, vashandi vese vanofanirwa kubaiwa nhomba yeCCIDID-19 kana kuti vakwanise kuwana pekugara kubva mugwaro rekudzivirira reBhangi; Bhanga richapa pekugara sezvinodiwa nemutemo kune vanhu vasingakwanisi kubayiwa nekuda kwekurwara kana chitendero chechokwadi.
KuFederal Reserve Bank yeSan Francisco, tinopa mabhenefiti anoshamisa anosanganisira: Medical, Dental, Vision, Pretax Flexible Spending Account, Yakabhadharwa Mhuri Yekuchengeta Kuchengeta, Backup Child Care Program, Pretax Day Care Flexible Spending Account, Mazuva Ezororo, Mazuva Anorwara. , Horidhe Yakabhadharwa, Inishuwarenzi yePeti, Matching 401(k), uye isinganzwiki nezve Retirement / Pension.
Tichaona kuti vanhu vakaremara vanowaniswa pekugara pakakodzera kuti vatore chikamu mukukumbira basa kana kubvunzurudzwa, kuita mabasa akakosha, uye kuwana mamwe mabhenefiti neropafadzo dzebasa.
KuFederal Reserve Bank yeSan Francisco, tinotenda mukusiyana kwevanhu vedu, mazano, uye zviitiko uye takazvipira kuvaka tsika inosanganisirwa inomiririra nharaunda dzatinoshandira. Iyo Federal Reserve Bank yeSan Francisco iEqual Opportunity Employer.
Squatters & Wasatch Beers Iye zvino Kuhaya - All Positions
Batanidza kune yavo runyorwa rweakashama nzvimbo.
iBehave Therapy Boka, LLC iri kutsvaga Behaeve Technologist.
NDINODZIDZISA KUSHANDA NOKUENDA KUNE CHINOTEVERA CHINOTEVERA:
Reports To: BCBA
iBehave Therapy Boka, LLC iri kutsvaga Behaeve Technologist. Chikwata chedu chinopa masevhisi kuvana vane Autism. Tiri kutsvaga vanhu vakazvimirira, vanoshingairira kushanda mumba memwana kana kuhofisi yedu, vachibatsira vese mwana nemhuri nekutaurirana, zvemagariro, uye nehunhu kutsigira. Maitiro Ekuzvibata anoshanda pasi pekutarisirwa kwemubatsiri wezviito uyo ane dzidzo uye ruzivo rwekupa ongororo, dzidzo, mazano ekurapa uye rutsigiro rwehunhu.
Yakanyanya kubhadhara uye mabhenefiti (Kusvika pamadhora 22 / awa, zvinoenderana neABA chaiyo ruzivo uye dzidzo)
Inishuwarenzi yehutano yevashandi venguva yakazara
Programme Assistance Program
Zvepamutemo / Zvemari Kubvunza
401k uye Kubatsira Kugoverana
Kubhadharwa kudzidziswa kuti uwane yako RBT Certification
Kubhadharwa kudzidziswa kuti ugamuchire yako BLS Certification
Dhiraivha nguva yekubhadhara
Vakanaka kwazvo manejimendi
Tine zvinzvimbo zviripo mu SLC, Davis, Weber, uye Tooele nzvimbo yenharaundas. Munyoreri fanira gara munzvimbo. Chinzvimbo chinogona kutanga chikamu chenguva uye kutamira kune yakazara nguva munguva pfupi iri kutevera.
Nenzvimbo yekushandira pamwe paBehave Therapy Boka, isu tinotarisira kushandisa vamwe vanoda kusimudzira basa ravo uye nekukanganisa nemhuri dzedu. Ndokumbira kuti ushanyire webhusaiti yedu ku www.iBehavetg.com
Summary: Inopa yakashandiswa maitiro ekuongorora kurapa kune vanhu vane autism nekuita anotevera mabasa.
Mabasa uye Mabasa sanganisira zvinotevera. Mamwe mabasa anogona kupihwa.
1. Inobatsira manejimendi nekuvandudzwa kwekuongorora, kubatana, kuita, uye kuongorora kwehunyanzvi-kuvaka uye hunhu hunotsigira vatengi vakapihwa.
2. Inopa imwe-ne-imwe kuita kwehurongwa hwekurapa uchishandisa ABA kurapa.
3. Inoshanda pamwe uye inokurudzira kutora chikamu kwemhuri kuita chirongwa chekurapa.
4. Inounganidza data uye inoshuma kuna maneja vhiki nevhiki.
5. Inoomerera kune zvimwe zvinodiwa zvinotsanangurwa muzvibvumirano zvehurumende.
Inofanira kunge iine angangoita makore gumi nemasere ekuberekwa: Kuti uite iri basa zvinobudirira, munhu anofanirwa kukwanisa kuita rimwe nerimwe basa rinokosha zvinogutsa. Izvo zvinodiwa zvakanyorwa pazasi zvinomiririra iyo ruzivo, hunyanzvi, uye / kana kugona kunodiwa. Dzimba dzinonzwisisika dzinogona kuitwa kuti vakwanise vanhu vakaremara kuti vaite mabasa akakosha.
Mutauro Mutauro: Kugona kuverenga nekududzira zvinyorwa senge mitemo yekuchengetedza, yekushandisa uye yekuchengetedza mirairo, uye maitiro emanyorerwo. Mano ekunyora zvinyorwa zvenguva dzose uye tsamba. Kugona kutaura zvinobudirira pamberi pemapoka evatengi kana vashandi vesangano.
Kukurukurirana Mazano: Simba rekushandisa kusanzwisisana kunzwisisa kunzwisisa mitemo yakanyorwa mumanyorero, muromo, kana mifananidzo. Mano ekugadzirisa zvinetso zvinosanganisira zvidimbu zvakasiyana zvekrete mumamiriro ezvinhu akaenzana.
Dzidzo / Zvakaitika: UNOFANIRA kunge uine hushoma wediploma yechikoro chepamusoro kana degree redzidzo (GED).
· Hupenyu hwekutsigira hupenyu / CPR (inofanirwa kuwana, ikozvino chitupa chakasarudzwa asi chisiri chekumanikidza)
· Kunyoreswa Behaviour Technician chitupa (inofanirwa kuwana)
· Unofanira kupasa bvunzo yeTB
Rezinesi rekutyaira rinoshanda
· Inoshanda auto inishuwarenzi
· Yakavimbika Yekufambisa
· Unofanira kupfuudza kumashure skrini.
Kumashure macheki haafanire kuve nerekodhi uye kuburitswa kwemhosva yekutongwa inoratidzira maitiro ekuba, chisimba, kusatendeseka, hunyengeri, hunhu hwekushusha, hunhu, kana hunhu hwekudyira. Haifanire kunge iine chero mhosva dzekutongwa. Mukati memakore maviri apfuura, panofanirwa kuve pasina kutongwa kweDUI kana DWI. Mukati megore rapfuura, panofanirwa kuve pasina kutongwa kwakanangana nezvinodhaka.
Ruzivo, Unyanzvi, uye Humwe Unyanzvi:
· Unyanzvi hwekushandisa nguva
· Unyanzvi hwekutaurirana nemuromo
Izvo zvinodiwa zvemuviri zvinotsanangurwa pano zvinomiririra izvo izvo zvinofanirwa kusangana nemushandi kuti abudirire kuita mabasa akakosha eiri basa. Pokugara zvine musoro zvinogona kuitirwa kuti vanhu vakaremara vaite mabasa akakosha.
Paanenge achiita basa rebasa iri, mushandi anogara achidikanwa kumira, kufamba, kugara, kushandisa maoko, kusvika nemaoko nemaoko, kukwira kana kuenzanisa, kukotama, kupfugama, kugwadama kana kukambaira, uye kutaura kana kunzwa. Mushandi anowanzodiwa kuti amhanye. Mushandi anofanira kupota kusimudza uye / kana kukwira kusvika pamakumi mashanu emapaunzi. Hakananga ekuona kugona kunodiwa nebasa iri kunosanganisira kuona padhuze, kuona kure, kuona pariperi, kuona kwakadzika, kugona kugadzirisa kutarisisa, uye kugona kuona ruvara.
Basa rekushandiswa kwemamiriro ezvinhu akarondedzerwa pano inomiririra avo vashandi vanosangana pavanenge vachiita basa rinokosha rebasa iri. Kugadziriswa kwakanaka kunogona kuitwa kuti vanhu vane hurema vabate basa rinokosha.
Paanenge achiita basa rebasa iri, mushandi pano neapo anosangana nemamiriro ekunze ekunze.
Iyo ruzha mwero munzvimbo yebasa inowanzo rira.
Mushandi anogona kuratidzirwa kune zvinokwanisika allergen (kati, imbwa, nzungu, vamwe).
Aina dzeJobho: Nguva yakazara, Chikamu chenguva
Bhadhara: Kusvika kumadhora 22.00 paawa
Isu tinoda kuti vashandi vapfeke kumeso kumeso pavanenge vachishanda nevatengi. Tine sanitizer nemidziyo yekuchenesa inowanikwa nyore. Isu tinokumbirawo kuti vatengi nevashandi vagare vachigeza maoko nekutarisa tembiricha pakutanga kwekuchinja kwese.
Clever Octopus Dhijitari Kutaurirana Nyanzvi (Chikamu Nguva)
Maawa: 15-20 maawa / vhiki * ona maawa uye kubatanidzwa
Bhadhara: $ 13-15 / hr
Clever Octopus (COI) Creative Reuse Center (CRC) inosimudzira kugona uye kuita munharaunda
kuburikidza necycycling uye hunyanzvi dzidzo. Iyo Dhijitari Kutaurirana Nyanzvi inoshuma kune Executive
Director uye vachashanda vakabatana pamwe neCOI Chikwata: Executive Director, Chirongwa Director,
Chitoro Manager, Warehouse Manager, VISTA Chirongwa Murongi, VISTA Nharaunda Engagement
Coordinator, VISTA Development Coordinator, uye VISTA Communications Coordinator kugadzira,
gadzira, dhizaini, uye isa zvinyorwa uye zvepamhepo zvekushambadzira kutsigira kukura - zvese zvipfupi uye
nguva refu - uye zvinangwa zveClever Octopus.
Iyo Dhijitari Kutaurirana Nyanzvi inotarisira yedu yepamhepo mhando uye mameseji! Pasi pekutungamira kwe
Executive Director, iwe uchave unoona nezvese kutaurirana kwepamhepo, kusanganisira: vezvenhau,
matsamba enhau nguva dzose, kuchengetedza webhusaiti yedu, kurongedza mapepanhau, makiyi ekushambadzira makuru uye kushambadzira, uye
zvinonyanya kukosha, kugovana basa redu!
Tiri kukura nekukurumidza uye tinoda manejimendi, mashandiro, uye zano rekubatsira. Tiri timu diki
uye munhu wese anopa zvinopfuura avo vepamoyo mabasa. Kubatira pamwe uye kutanga ndizvo zvinofanirwa! Nekuti
yemavambo-ekutanga maitiro ebasa redu, zvinhu zvinomhanya nekukurumidza, uye uchave wega muridzi kutsanangura nekunatsa
maitiro. Isu tinofara kuti mumwe munhu ave nehunyanzvi mune iri basa uye akure nesu.
Iwe unenge uchiita tsvagiridzo, kuunganidza data, nzira dzekuyedza, kugadzira zvemukati, kutarisira
kushambadzira uye hukama hwekutengesa, zano, uye bhajeti rekushambadzira.
Dhijitari Kutaurirana Nyanzvi achagamuchira ruzivo uye ogadzira enhau enhau
kutenderera pane izvi. Kushambadzira kunozoongorora mashandiro ayo uye nekupa matanho.
A) ZveMagariro Midhiya
1. Shandira pamwe neCII Chikwata kugadzira zvirevo zvezuva nezuva, zvinobudirira, uye zvinowirirana
kune yega yega nzira dzeCOI. Izvozvi nzira dzinosanganisira: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn,
Yelp, uye Google.
2. Chengetedza Google ad mazwi, Google Search koni, analytics, Google Bhizinesi.
3. Ita macampaign akabatana - izwi uye dhizaini - paemail (Emailchimp), Webhu
(Squarespace), Nhare, Targeted Dhijitari (Facebook & Instagram), uye POS system (Square).
Shanda neMubatanidzi weKutaurirana kugadzira mwedzi wemagariro uye pfungwa,
pamwe ne grid chirongwa.
5.Gadzira kana dhizaini mafoto uye zvemukati, zvinosanganisira post-kugadzirisa muCanva.
6. Ronga uye katalog mapikicha uye zvemukati pane Flickr.
7. Nyora uchibata pa-brand kopi / zvinyorwa.
8. maneja edu eedhisheni Instagram Nyaya kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
9.Gara nharaunda munharaunda dzese (makomendi, maDM, ma tag, kuita kwezuva nezuva).
10. Ziva mikana yemagariro uye kuenderana kwechiratidzo kuti uwedzere kukura maakaundi.
11. Gara uchifambirana neazvino matekinoroji uye maitiro mune enhau midhiya, dhizaini maturusi, uye maapp.
12. Kukudziridza inharaunda inoshanda pamhepo uye kukura vateereri vedu - kushanda neTimu ku
sarudza zvinangwa zvekukura uye nekunatsa izwi redu. Iterative uye adaptive nzira ku
nzwisisa izvo nharaunda yedu inoda kuona uye nemazvo nzira yekugovana edu ekuvandudza, zviitiko,
data, uye basa.
13. Teedzera metric dzehukama enhau mashandiro, kusanganisira: vateveri, kubatanidzwa, vateereri
huwandu hwevanhu, etc.
kuvapo, nekusimudzira basa redu rekurwisa-rusarura.
B) Tsamba dzemashoko
1. Shandira pamwe nechikwata cheCOI kuti uone zvekuvandudzwa uye zvakakosha kuti ugovane kuburikidza netsamba dzetsamba
mwedzi wega wega. Govera mapikicha uye mameseji kuCommunicator Coordinator uye
Community Engagement Coordinator inodiwa.
2. Tsigira COI timu ine dhizaini inoratidzika ine yakajeka, ine chirevo mameseji akabatanidzwa
3. Tarisa zvese zvinongedzo, mazuva, uye ruzivo rwechokwadi. Teedzera mashandiro ekuita uye shandisa iyi data
kuvandudza vateereri vedu kuita kuti matsamba enhau abudirire sezvinobvira.
4. Tsvaga mikana yekuwedzera tsamba dzemasaini-kusaina uye woga-govana tsamba yedu yetsamba ye
yakanangwa mishandirapamwe yekuona kuti nharaunda yedu yaona zvinovafadza kwazvo.
C) Webhusaiti Kugadziridza
1. Kugara uchigadzirisa webhusaiti kuti ugovane ruzivo rwazvino. Inosanganisira: kugadzirisa mapeji se
Maitiro anochinja kana masevhisi matsva akaunzwa, kuvandudza magiraidhi saka saiti iri nyowani uye
ikozvino, yekuvandudza mafomu sezviri kudikanwa kune mafomu, kusimudzira zviziviso uye zviitiko.
2. Kugadziridza kwemwedzi kune peji redu re data kuti tigovane metriki uye kukanganisa kwebasa redu.
3. Kutsvaga nzira dzekukwirisa saiti yedu, mitsva yekutsvaga, uye analytics.
D) Kugadzira yedu Dhijitari Kutaurirana Brand uye Strategic
1. Shandira pamwe neCII Chikwata kugadzira khalendari yezviri mukati uye kuronga gore rega, mwedzi,
2.Shandisa mifananidzo inowirirana uye mutauro pamapuratifomu kuvaka izwi, kutarisa, uye kunzwa kweECI
3. Paridza uye edza nyowani kana hunyanzvi enhau enhau. Kugadzira uye kufungidzira
4. Tsvagurudzo vangangoita vanobatsirana / vanokurudzira uye vagadzirise kudyidzana kunobatsira.
5. Kukura kwedu vateereri uye traffic pane yemagariro, tsamba, uye online. Gadzira kubatana kune nyowani
mapoka kuburikidza nekunzwisisa kwechikamu chipi chesangano redu chinounza kukosha kwazvo
6. Shandira pamwe naCommunicator Coordinator kuti utore yazvino kana kugadzira dhijitari nyowani
E) Kushambadzira uye Press
1. Shanda neMubatanidzi weKutaurirana kugadzira kana kusarudza mifananidzo yekutengesa kukuru
mishandirapamwe kana zviziviso
2. Shanda neCII Team kurongedza chero mibvunzo yemapepanhau uye logistics
3. Shanda yekushambadzira mishandirapamwe kana nguva dzekudhindisa mukendendende yezviri mukati
4. Tsvaga nzira dzekugadzira dzekutyaira traffic kuchitoro chedu chepamhepo kana kutengesa zvigadzirwa kuburikidza nemikana yedu
(mienzaniso: Instagram flash kutengesa, kana Facebook mhenyu mhenyu, nezvimwewo) Izvi zvinogona kusanganisira zvinokurudzira
kune vateveri vedu, kana madhiri anopihwa kukurudzira vateveri vavo.
5. Kuunza mipiro uye kutsvaga mari, kunyanya edu ekupedzisira-egore ekupa mushandirapamwe.
● Anobudirira weDhijitari Kutaurisa achave nechokwadi chese
muteveri / fan / muverengi / mushanyi anonzwisisa ruzivo rwechinangwa chedu, zvatinoita, yedu system,
nzvimbo dzedu, zviitiko zvedu, vatinoshanda navo, chirongwa chedu chekuzvipira, uye maitiro ekuwana machira.
Wese munhu anofanirwa kunzwa akakosha pamupiro wavo kubasa redu rekushandura indasitiri, zvakanyanya
kuitira kuti vanzwe ruzivo uye simba rekugovana ruzivo rwavo nevamwe!
● Kubatana nenhengo dzese dzeClever Octopus Team (Executive Director, Chirongwa
Director, Shop Manager, Warehouse Manager, Chirongwa Coordinator, Nharaunda
Engagement Coordinator, Development Coordinator, uye Communications Coordinator) ku
gadzira yakachengeteka, inotsigira, uye inogadzira nzvimbo yebasa. Kusanganisira kuzvipira kunongedza uye
gadziriso yechokwadi yekukonana uye mupiro wakavhurika uye wakatendeseka mukukudziridza kusiana,
kuenzana, uye kusanganisa basa.
● Dhigirii reBachelor's (kana Bachelor of Fine Arts) muKugadzira, Kushambadzira, Art, Multimedia, Graphic
Kutaurirana, kana inzvimbo inowirirana (s) yakasarudzika kana yakaenzana makore echiitiko chekushanda.
● Portfolio (online kana pdf) inoratidza kugona kugadzirira zvekushambadzira kana zvinyorwa zvemablog
kune akasiyana mapurojekiti akakurudzirwa.
● Ruzivo rwakadzika rwegadziriro, typography, uye dhizaini zvinhu uye kugona kutevera
zvazvino dhizaini dhizaini.
● Unyanzvi neAdobe Creative Suite, Canva, uye Google Suite.
Maawa & Nguva Yekutevera Mazano
Webhusaiti Management: 2
Kushambadzira manejimendi: Google Analytics, SEO 3-4
Kutungamira kwenhau: 1
Yemagariro Media Management: 5
Ndokumbira utumire email yako tangazve uye tsamba yekuvhavha kuna cleveroctopusinc@gmail.com.
Ruzivo rwunoratidzwa rwunoratidza hunhu hwese uye nhanho yebasa inotarisirwa kuvashandi mune ino nhevedzano. Izvo hazvina kugadzirwa
kuve, kana kududzirwa, seyakazara yehuwandu hwemabasa ese, mabasa, hunhu, nezvinangwa zvinodiwa
vashandi vakapiwa iri basa. Clever Octopus inopa yakaenzana mikana yemabasa kune vese vashandi uye vanyoreri ve
basa pasina hanya nedzinza, ruvara, chinamato, bonde, mavambo enyika, zera, kuzivikanwa kwechikadzi, zvebonde, hurema kana genetiki.
Iyi bumbiro inoshanda kune ese mazwi uye mamiriro ebasa, kusanganisira kuunganidza, kuhaya, kuisa, kusimudzira, kumisa basa, kudzinga basa,
rangarira, kuchinjisa, mashizha ekusavapo, muripo, uye kudzidziswa.
Retail Warehouse Mubatanidzwa paStitch Fix
Retail Warehouse Sangana
paStitch Gadzirisa (Ona mabasa ese)Gungwa reMunyu, UT
PaStitch Fix, tiri kuchinja kuti vanhu vanowana sei zvavanoda. Huya ushande panowanikwa zvinhu zvikuru mudura redu nyowani reSalt Lake - shandisa zvino!
MUCHADA KUSHANDA PASITITI FIX NEKUTI ...
Parizvino mubhadharo i $ 16 / awa
Chiremba, mazino uye maonero mabhenefiti ayo anopinda-mukati pazuva rako rekutanga rebasa
401k: Pinda muchirongwa ipapo ipapo; inokodzera mutambo mushure megore rimwe nemaawa chiuru ebasa
Nguva yakabhadharwa pazororo
Kupisa kunodzorwa imba yekuchengetera
Inoshamisa nzvimbo yebasa ine mahara zvekudya / zvinwiwa uye zvinonakidza zviitiko zvepamwedzi
Yakazara-nguva mikana chete - kutanga misi muna Nyamavhuvhu
MUCHANAKISWA PAMUSORO PENYAYA IYO NEKUTI…
Iwe uchafambidzana nechikwata chako kuti ubatsire munzira dzakasiyana siyana senge kuongorora uye kuronga zvinyorwa, kuchinjana, kupfeka zvipfeko, zvishongo zvetsiva, kana kushanda pamapurojekiti akasarudzika mudura redu.
Tinogamuchira, tinokoshesa uye tinotarisira mhinduro yako uye yakasarudzika maonero!
Iwe unofarira uye unoda kutsvaga nzira dzekugadzira dzekuita zvinhu zvirinani uye zvinobudirira kune vedu Vatengi.
TINOFADZWA NEKUTI WAKO…
Zvinotendwa zvakavimbika uye zvine mutoro. Iwe unove nekupinda kwakanakisa uye unogara uchisangana nezvinangwa uye metric.
Ratidza hunhu-hunhu uye hunogona kuchinjika mune rako basa, uchiziva kuti Mutengi anogara ari pamusoro wepfungwa.
Gamuchira yemhando yepamusoro mhinduro uye uzvione sekukosha pakuita kwako kwakanyanya kunaka.
Unokwanisa panyama kuva patsoka dzako maawa masere kusvika masere pazuva, kufamba, kukotama, kusimudza kusvika pamakumi mashanu emapaunzi, uye nekuchengetedza muviri wako uchigara uchifamba.
Iva nehunyanzvi hwakaringana hweChirungu kuona kuti maprotocol ekuchengetedza uye mashandiro akanaka anochengetedzwa.
Iva nediploma yechikoro chepamusoro kana zvakaenzana (zvakasarudzika).
Vane makore angangoita gumi nemasere.
TIRI WAKAenzana MHOSVA WEMUSHANDI ANOTSVAKA VANHU VANOKOSHA uye VANOTSIGIRA SHAMWARI, TIMA-YAKADZIDZWA NEDZIRA DZINOSHANDA BASA REMAHARA. VANOKUMBIRA VANOGONESESWA KUTI VAZVIMBISE KWAZVINODA MHOSVA KUTARISIRA CHINODZWA CHINODZWA PAMUSORO KUSVIRA KUSHANDISA BASA.
Ndokumbirawo uongorore Stitch Fix's Yekuunganidza Yakavanzika Policy pano:
Hogle Zoo iri Kubatira - Nzvimbo zhinji Dzinowanikwa
Tine mikana yakawanda!
Zvese zviripo kuvhurwa kwemabasa ku zoo zvinogona kuwanikwa pa: https://www.hoglezoo.org/jobs_volunteers/job_openings/